Style – Gentleman Magazine
ကလေးတစ်ယောက်လို ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ (Zawgyi) ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ဖို့အတွက် အဝေးကြီးကို ကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ဈေးကြီးတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်နေဖို့၊ အတွင်းစိတ်ကို သိရှိလာတဲ့အထိ တရားထိုင်နေစရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုကို တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေသူတွေကို သတိထားကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ကလေးတွေရဲ့
James Bond ထံမှ လေ့လာသင်ယူရမည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ
James Bond ထံမှ လေ့လာသင်ယူရမည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ (Zawgyi) နာမည်ကျော် စပိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဟာ အဆင့်မြင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ။ သပ်ရပ်ခမ်းနားတဲ့ အမိုက်စားဝတ်စုံတွေနဲ့ အလန်းစားမိန်းမလှလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကနေ လေ့လာအတုယူနိုင်စရာတွေရှိသလို ရှောင်ကြဉ်ပစ်ပယ်စရာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဘာတွေကို ဆောင်ပြီး ဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲ ကြည့်ရအောင်။ ဆောင်ရန် (၁)
ဘ၀မှာ ဘာတွေဟန်ချက်ညီနေဖို့ လိုလဲ (Zawgyi) လူတိုင်းမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘ၀တစ်ခုရှိပါတယ်။ အိပ်ရာထ၊ အစားစား၊ အလုပ်သွား၊ အစားစား၊ ပြန်အိပ် စသဖြင့် လည်ပတ်နေကြရပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘ၀ရဲ့အခြားသော ရှုထောင့်တွေကို စဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင် ဘ၀ရဲ့ဟန်ချက်ညီမျှမှုပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ မဖြစ်မနေ ဟန်ချက်ညီမျှနေရမယ့် အရာတွေ ရှိပါတယ်။
အသက်(၂၀)ကျော်မှာ လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများ
အသက်(၂၀)ကျော်မှာ လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများ (Zawgyi) ၁။ တစ်ယောက်ထဲ ခရီးသွားပါ အားလုံးနဲ့ အဝေးဆုံးကို ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့နေရာတစ်ခုကို သွားပြီး ဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်က ဘာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ မမြင်ဖူးတာတွေ၊ မကြုံဖူးတာတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကို ခံစားကြည့်ပါ။ ဘာသာစကားအသစ်သင်ယူပြီး လူအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံကြည့်ပါ။
ရူပါလန်းစေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာများ (Zawgyi) ယောင်္ကျားလေးအများစုမှာ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်လာရင် မွေးကတည်းက ပြောစရာမရှိလောက်အောင် ချောမောခန့်ညားသူက ရှားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကြွေဆင်းသွားလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ရူပကာမျိုးကို လူတိုင်းမပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားအပေါင်းတို့ အားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဆိုတာက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သင်ဘယ်လိုပြုစုထိန်းသိမ်းလဲဆိုတာပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ သင့်ရုပ်ရည်အတွက် နည်းနည်းလေး အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် အပြောင်းအလဲက
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]အမှားကင်းကင်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်သလား ? [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ဘာမဆို ပွီးပွညျ့စုံဖို့ လိုအပျသလား ? ဘယျကိစ်စမဆို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျတာက မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမဆို ခွောကျပွဈသဲကငျးစငျ ပွီးပွညျ့စုံနအေောငျ လုပျဆောငျတာကရော အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတဈခုလို့ ထငျပါသလား။ အားလုံးကို
05/06/2017 22/06/2017 escapetravelmagazine
ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပုံဖော်ရမည့် အကျင့်စရိုက် [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ကိုယျတိုငျဖနျတီးပုံဖျောရမညျ့ အကငျြ့စရိုကျ လူတိုငျးလူတိုငျးမှာ အမြားနဲ့တူတဲ့ အကငျြ့စရိုကျရော၊ မတူညီတဲ့အကငျြ့စရိုကျတှရေော ရှိတတျကွပါတယျ။ တဈခြို့လူတှမှော အကငျြ့စရိုကျကောငျးတှရှေိပွီး တဈခြို့မှာတော့ မရှိကွပါဘူး။ သငျ့မှာရော ဘယျလိုအကငျြ့စရိုကျတှေ ရှိပါသလဲ။ လူတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့စရိုကျကို ပနျးပုရုပျတဈခုလို ဖနျတီးပုံဖျောလို့